Muqdisho: 20 Qof Oo Ku Dhintay Weerar Al-shabaab Ku Qaadday Huteel Hoy U Ah Xildhibaanno | Dhamays Media Group
Muqdisho: 20 Qof Oo Ku Dhintay Weerar Al-shabaab Ku Qaadday Huteel Hoy U Ah Xildhibaanno
Muqdisho (Dhamays) – Qaraxyo iyo is-rasaaseyn Maanta gelinkii hore ka dhacday Huteel lagu Magacaabo Dayax oo ku yaalla magaalada Muqdisho, ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof, waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan.
Abaaro sagaalkii aroornimo oo daqiiqado la 'a ayaa gaadhi weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu qarxiyay dibadda hotelka Dayax oo ku yaala waddada Maka Al-mukarama, dabadeedna Rag hubeysan ayaa ka dagay gaadhi kale daqiiqado kadib markii uu qaraxu dhacay iyagoo u gudbay barxadda hotelka halkaas oo uu ka bilowday dagaal culus oo u dheexeeyay Ragga weerarka soo qaaday iyo illaaladdii hotelka.
Khasaare ballaadhan oo naf iyo maalba leh ayuu geystay qaraxa koowaad, sababtoo ah halka uu hotelku ku yaalo waxa ka ag-dhaw goobo ganacsi oo aad looga tukaamaysto iyadoo waddada uu hotelku ku yaalana ay gaadiid badan isticmaalayeen.
In cabaara markii ay rasaastu socotay ayaa gaadhi kale oo loo malaynayo inuu ahaa kii ay ka dageen Raggii weerarka hotelka ku qaaday uu qarxay, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kale oo dhimasho iyo dhaawcba leh, waxaana kamid ahaa dadka ku dhaawacmay qaraxa labaad ilaa todobo Weriye oo u kala shaqeeya warbaahinada caalamiga ah iyo kuwa maxaliga.
Hotel ka la weeraray waxa degganaa qaar kamid ah xildhibaanada cusub ee baarlamanka Soomaaliya iyo siyaasiyiin.
Dhimashada weerarkaasi uu dhaliyay ayaa la isku khilaafsan yahay iyadoo saraakiisha gaadiidka gurmadka degdeg ah ay sheegeen inay ku arkeen goobaha ay qaraxyadu ka dhaceen Meydad ka badan 20 Qof.
Sida la sheegay guri ku dhaw hotelka oo isna uu qaraxu baabi'yay waxa ku dhintay labo odey-dhaqameed oo caana oo ka soo jeeda deeganada koonfur-galbeed Soomaaliya, kuwaas oo la kala yidhaahdo Malaaq Malaboow Isaaq Xasan iyo Malaaq Cabdirashiid Sheekh cabdisalaaan, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay odey dhaqameedyo kale oo ay kamid ahaayeen, malaaq Xasan Buulle, Malaaq Yuusuf Cabdiyoow iyo Malaaq Shariif Muxiyadiin.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliydda weerarkii lagu qaaday hotel Dayax. War ka soo baxay Al-shabaab oo Caawa lagu baahiyey Warbaahinta Internet-ka ee taageera, ayaa lagu sheegay in Weerarkaasi ay Masuul ka yihiin Al-shabaab isla-markaana Ciidammo ka tirsan Al-shabaab oo aad u hubaysan ay u suurto-gashay inay gudaha u galaan Huteelka Dayax ee la weerarray, halkaasi oo ay muddo kula dagaalameen Ciidammada Dawladda Soomaaliya.
Weerarada Al-Shabaab ayaa sii kordhayay bilihii ugu danbeeyay, weerarkan Shalay dhacay kii ka horeeyay waxa horaantii bishan lagu qaaday hotelka Peace oo ku garoonka diyaaradaha, waxaana ku dhintay dad ka badan toban qof.
Weerardan cusub ayaa imanaya xili la isu diyaarinayo doorashada Madaxweynaha oo dhawr jeer horey u dhacday.
Previous: Saddexda Xisbi Qaran Oo Ku Heshiiyey In Doorashada Dib Loo Dhigo & Madaxweynaha Oo Bogaadiyey
Next: Daawo: Hooyo Danyar Ah Oo Sheegtay In Gurigeedii Dab La Qabadsiiyay Si Looga Raro, Baaqna U Dirtay Madaxweyne Siilaanyo